Marondera man’s PEN!S enlarges, touches the ground after having S-E-X with a married woman – Makuhwa.co.zw
Marondera man’s PEN!S enlarges, touches the ground after having S-E-X with a married woman
VECHIKURU vagara vachizvitaura kuti, “Mukadzi wemuridzi siyana naye” asi kune vamwe vanoisa zvitanda munzeve vachitoti “ndiye anoita”.
Pane murume wekusada kudarikwa nemarokwe kumapurazi akagariswa vanhu patsva ekuMount Arthur, kwaNenguwo kuMarondera, uyo anonzi akazogadzirwa nemishonga yerukwa kana kuti rukawo apo akashinha nemudzimai wemuridzi ndokuzofa ava chirema apo sikarudzi yake yakareba zvekuzvuzvuruka nepasi.
Cloudy Chorira (ARIPAMUFANANIDZO) anonzi akazofa nekunwa muchetura apo akanga ashungurudzwa nedambudziko rekurebenuka kwesikarudzi yake.
Mukutaurwa kwazvo, zvinonzi sikarudzi yemurume uyu yaingorebenuka zvisinganzwisisike, pane dzimwe nguva ichimbozvimba nekumbony’ura mudumbu.
Muchakabvu uyu anonzi akanga adanana nemudzimai wemumwe muvakidzani wake (zita tinaro).
Hatina kukwanisa kuwana zita remudzimai wemuvakidzani wekunzi aidanana naCloudy sezvo achinzi akadzingirwa kumusha kwake kuMberengwa arambwa nekuda kwenyaya iyi.
Zvichakadai, pane mashoko anoti muridzi wemukadzi wekudanana naCloudy akafawo mutsaona yemotokari kwaMurehwa svondo rapera uko akange atamira nguva pfupi yadarika zvichitevera kubuda kwenyaya yemudzimai wake.
Vagari venzvimbo iyi, iyo iri mumugwagwa unobva kuHarare uchienda kuHwedza, vanoti vakashamiswa zvikuru nemhando yedenda rakabata Cloudy.
Muzukuru wemushakabvu, Chamunorwa Gwasira (24), akatsinhira nyaya iyi achiti firo yasekuru vake yainge yakaoma uye yakavasiya vazere nekutya.
“Sekuru Cloudy vakadanana nemudzimai wemuridzi apo murume wemudzimai uyu anonzi akasvika pakutsvaga rukwa ndokupinga mukadzi wake. Nhengo yavo yakatanga kureba zvekudarika makumbo avo, dzimwe nguva ichimbony’ura zvekutadza kuoneka. Sekuru vakazonwa muchetura varwadziwa, aiva mashura chaiwo,” akadaro Gwasira.
“Sekuru vakatoshevedza hama dzavo vakadura kuti vakadanana nemudzimai wemunhu. Vehukama vakatombonoona murume uyu kuti vamuripe. Murume uyu akaramba kuripwa achiti hapana zvaaiziva, saka nekufamba kwaiita hama dzichiedza kubatsira zvichiramba, sekuru vakazonwa muchetura ndokufa. Sekuru vaiva vakaroora vachitova nemhuri yavo uye kwaingova kusada kudarikwa nemarokwe chete kunonyenga mudzimai wemumwe,” akadaro Gwasira.
Sekuru vaCloudy, VaChester Chakanyuka, vakati:
“Ini ndakangozvinzwa, asi zvakawanda hapana zvandinoziva.”
Mumwezve muzukuru mumhuri iyi, VaSimboti Gwasira, vakati vanozviziva kuti sekuru wavo akafa achitambura mushure mekudanana nemudzimai wemunhu.
“Sekuru vakarwara ndokubuda pachena tikazoenda isu kuvanhu ava tichiti tiripe, tichida kusunungura hama yedu sezvo yakanga yabvuma mhosva. Murume wemukadzi uyu akaramba achiti hapana izvo aiziva nekuda kwenyaya iyi achiti aisaziva kuti mudzimai wake akaiswa nani rukwa.
“Akati mukadzi wake akagadzirwa kumasowe uko akamboenda. Takamboenda kumusha kwemudzimai uyu kuMberengwa tichida kuti titaurirane asi zvakaramba,” vakadaro VaSimboti.
“Mhosva iyi hatina kumboiramba vanhu vose vari vapenyu, taida kutaurirana. Zvino Cloudy akafa, uyuwo muridzi wemudzimai tiri kunzwa kuti akafawo netsaona yemotokari kwaMurehwa kwaange ave kugara. Zvino nyaya iyi ichataurwa nani vose zvavafa? Ukuwo mudzimai ari munyaya iyi akaenda kumusha kwake.
“Chokwadi ndechekuti munhu akagadzira sekuru vangu uyu aisada kuti vararame apo akaramba kuti hapana zvaaiziva nekuda kwenyaya iyi. Akarambirei kuripwa?” vakadaro.
Mudzimai waCloudy, Mai Forget Kambarami, vakazotaurwa navo panhare sezvo pakashanyirwa nzvimbo iyi vaisavapo ndokuti havadi kutaura zvakawanda.
“Ini semudzimai wemufi handikwanise kutaura nemi nekuti munondifungisa zvinhu zvakadarika. Kuda kundifungisa kuti ndirwadziwe here? Regai ndigokupai nhamba dzevakoma vemurume wangu mugotaura navo. Ini handina chandinogona kutaura, ko sei musina kuuya pakaitika nyaya iyi? Mave kuzouya nhasi tanzwa kuti iye murume wemudzimai wemhosva akashaika?” vakadaro.
Mukoma waCloudy, VaChinyangare, vakataurwa navo panhare vakaramba zvakare kutaura zvakawanda apo vakadya magaka mambishi vachiti:
“Maiva kupi pazvakaitika, mave kuda kuzviziva nhasi? Handidi kuti nyaya iyoyo ibude munhau. I dont need it to be published. Ivo vakambotanga kukupai mashoko iwayo ngavakupei zvose kwete ini.”
Nyaya iyi inonzi yakasvitswa kwasabhuku wenzvimbo iyi avo vanonzi vakaedzawo kuyananisa mhuri idzi asi zvikashaya basa.
Pakashanyirwa nzvimbo iyi, sabhuku vakangozivikanwa nekuti VaCheni, havana kuonekwa sezvo pamusha pavo paingova nemadzimai avo maviri.
Mudzimai mudiki wasabhuku, Mai Linda Nzou Cheni (24), vakatsinhira marwariro aCloudy uyewo kuti ainge aisirwa rukwa pamudzimai wemuridzi waaidanana naye.
“Inyaya yaingotaurwa kubva Cloudy achirwara kuti akanga agadzirwa nemurume wemukadzi waaidanana naye. Nhengo yake inonzi yaimboreba kusvika mumabvi, dzimwe nguva ichidarika kusvika kuzvigunwe kutsoka. Nyaya iyi inoda muroora wavo dai aripo, ndiye anogona kuziva zvose nekuti aiti tezvara vake vakanga vasisanyare, vainge vave kungoratidza vanhu nekurwadziwa,” vakadaro.
Vahosi vasabhuku, Mai Annah Cheni (45), vakatsinhirawo vachiti:
“Ini inyaya yandaingonzwa ichitaurwa nekuti apo airwarwa handina kumbomuona kusvikira azofa, asi zvizere muno izvozvo.”
Mupurisa uyewo ari mubatsiri waShe Nenguwo, VaJustice Jugwete (40), vakatsinhira vachiti nyaya iyi yakasvitswa kudare rashe.
“Nyaya iyi yakasvika kudare seguhwa kwete zvekuti kune vakauya kuzomhan’ara. Ikurudziro yangu semupurisa wamambo kuti vanhu vakasangana nenyaya dzakadai ngavakurumidze kuenda kwamambo dzimwe nguva tingadai takamhanya-mhanya takatsvaga machiremba echivanhu akarapa murume uyu,” vakadaro.
Related Topics:kuMaronderaMount ArthurSekuru Cloudy